आस्था राउतमाथि त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा चेकिङमा भएको चाहिँ के थियो त ? | Nepalkakura
Home गृहपृष्ठ मनोरञ्जन आस्था राउतमाथि त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा चेकिङमा भएको चाहिँ के थियो त ?
आस्था राउतमाथि त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा चेकिङमा भएको चाहिँ के थियो त ?
आखिर आस्था राउतमाथि त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा चेकिङमा भएको चाहिँ के थियो त ? विमानस्थल सुरक्षाको समयमा राउतमाथि भएको के थियो भन्ने भिडियो प्राप्त भएको छ ।
Previous articleप्राणघातक रोग फैलाउने कोरोना प्रजातिको भाइरस नेपालमा मानिसमै
Next articleगायिका आस्था राउतलाई जाँच गर्ने प्रहरी जवानले आफूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै उजुरी